Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || कायाकैरन शनिबासरीयमा–लक्ष्मण अर्याल – kayakairan.com
कायाकैरन शनिबासरीयमा–लक्ष्मण अर्याल
७ भाद्र २०७६, शनिबार ०५:४३
लक्ष्मण अर्याल (५०), अनुसन्धानमुलक लेखनीमा क्रियाशील छन् । उनी विशेषगरी कथा लेखनमा रुचि राख्छन् । उनका टुटीकाण्ड र औंला गरी दुई लघुकथा संग्रह प्रकाशित छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका तथा स्मारिकाहरुमा सम्पादन अनुभव बटुलेका अर्याल वाल्मीकि साहित्य सदन रत्ननगरले प्रकाशन गर्ने सम्प्रेषण साहित्यिक पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक हुन् । अर्याललाई मेरो सिर्जना स्तम्भअन्तर्गत हामीले भदौ महिनाको पाहुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं । महिनाभरका सबै शनिबार उनको सिर्जनात्मक पेरिफेरिमा रहेर सामग्री प्रकाशन गर्दै जानेछौं । आज पहिलो श्रृंखलामा उनका पाँच लघुकथा समेटेका छौं ।
“कतिको दिम् ?”–उर्वशीले कान्छालाई भनी ।
“दिदी, आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन । आज जे ग¥यो बर्सैभर त्यही गरिरनुपर्छ रे । भो, खान्न आज । रक्सीले मेरो घरै बिग्रियो ।”–कान्छाले मन बाँधेरै यति बोल्यो ।
“त्यसो भा तँ किन आको त भट्टी ।”–उर्वशी रिसाई ।
“न्यास्रो लाग्यो ।”
“खै ।”–डिच्च हाँस्यो कान्छो ।
“आत्माले मागेको छ तेरो । खा । आत्मा मार्नुहुन्न तर आज म उधारो दिन्न । आज उधारो दिए बर्सैभर कारोवार उधारामा चल्छ भन्छन् ।”–उर्वशी भन्छे ।
कान्छाले घर सम्झियो । आमा बिरामी छिन् । विक्रमेकी आमाले छाडेर गै हाली । ऊ गएको पनि आज दश महिना भयो । फर्केर आउली भन्ने लाग्याथ्यो तर आइन । निठुरी रहिछ । ऊ बारम्बार सम्चार पठाउँथी–रक्सी छोड् अनि आउँला । कान्छाले रक्सी छाड्न के पो गरेन र –पशुपतिको आर्यधाट पुगेर बोत्तल बगायो, दाइकी जुम्ल्याहा छोरीलाई टीका लाएर कसम खायो तर …… ।
उर्वशीले कुराको कापे बनाएर भनी–“के सोचेको ? खा । सोच्नेले खाँदैन, खानेले सोच्दैन ।”
कान्छाको एक मनले भन्यो–“विक्रमेकी आमा वचनकी पक्का छ, फर्केर आउँछे, नखा ।”
रक्सीको सुगन्ध कान्छाको नाकैमा बसाएर उड्यो । मन बाँधिराख्न सकेन उसले । यही कमजोरी छ उसको–खायो । आमाले फरियाका टुप्पामा बाँधेर राखेकी सय रुपियाँको पनि सत्यानाश भयो ।
कान्छाले स्खलित अनुहार लगाएर भन्यो–“दिदी, तिमीले कर गरेर पो । अब बर्सैभर विक्रमेकी आमा आउन्न ।”
उर्वशीले भनी–“रक्सी खानै पर्ने कस्तो बानी तेरो । मैले त खा खा भनेर आÇनै स्वार्थका लागि भनेकी । आज ग्राहक धेरै भए बर्सैभरि कारोवार चल्छ–हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो । तँ त रक्सी खान्छस् अनि जान्छस् । तँ जस्ता ग्राहक बढाउन सके … । तँ सुधो गाईलाई के था–रक्सी मात्र बेचेर यो घर चलेको छ र ?”
फेरिएको छ परिचय
“राम्चेका पाखाभरि खोतलिएछ ।”
“पहिले कस्तो थ्यो र बा ?”
“अहिलेजस्तो कुरुप थिएन । मनमोहक थियो यो गाउँ ।”
“हो र बा ?”
“बर्सैपिच्छे विकास खन्याइन्छ यहाँ तर भाँडाबाहिर पोखिएर सकिन्छ । हिउँदमा खोतलिएका बाटाहरू बर्सात्सँगै सलल बगेर जान्छन् । यस्तै विकासे कामले धेरैको सहरमा घर ठडिएको हल्ला सुनिन्छ ।”
बाबुछोरा गफिंदै थिए ।
सुनसान छ गाउँ । हरेक घरमा बृद्ध बा र आमा पिंढी रुँगेर बसेको भेटिन्छ । युवाहरू सधैं हतारमै हुँदा रहेछन्–कतार जानलाई । रनेले सुसेली हाल्दैन । सुब्बेले पात बजाउँदैन । च्यान्टेले ठाडा भाकाका गीतहरू गाउँदैन । झ्याउरेमा पकधुम पकधुम बज्ने मादल खरी झरेर थन्किएछ । खरले छाएका चारपाखे घर कतै देखिन्न–जताततै टिनका छानाहरू टल्किएर गाउँका मौलिकता हराएछ । कान्लाभरि खर्सेदो र टाँकीका नपलाएका बूढा रुखहरू जताततै भेटिन्छन् । राम्रो कुरा भनेको हलो जुवा र हल गोरु विस्थापन गरेछ हाते ट्याक्टरले ।
“दाइ खाजा खाम् अब” को आवाजले ऊ सचेत भयो ।
भुटेका अलौटा मकै र बैठके कचौराभरि बाक्लो मोहीको सट्टा चाउचाउले स्वागत गरिरहेको थियो पाहुनाहरूलाई गाउँमा । बहिनी भन्दै थिइन्–“अहिले गाउँमा पनि मनग्गे सुख भित्रिंदो छ दाइ ।”
टेबलमाथिको कफीको ग्लासबाट उडिरहेका टर्रा बाफतिर एकोहोरिएर अलखनन्दाले भाइलाई हेरी ।
आज वीराको पुण्थतिथि । अलखनन्दा र मानस दुबैले गम्भीर भएर आमा वीराका प्रतिमूर्तिमा सम्झनाका पुष्पहार चढाइरहेका छन् ।
अलखनन्दाले विस्तारै भनी–‘बघिनी बूढी ।’
गहभरिका आँसुभित्र पसेर मानस र अलखनन्दा दुबै अतीतमा पुगे ।
हरिहर वीराका पति थिए । थिए–यसकारण कि उनी अहिले छैनन्, अभौतिक स्वरूपमा मात्र उनी मानिसका मानसपटलभित्र रहेका छन् । दमले खायो उनलाई । कलकत्ता जाँदाको जुल्फीवाल लोर्के फोटो मात्र छ उनको भित्तामा । सात सात छोराछोरी हुर्काउनु सजिलो काम थिएन तर हुर्काइन् । तिनै सात मध्येकी थिइन्–अलखनन्दा । श्यामश्वेत समय थियो त्यो ।
पैंतीस वर्षकी मात्र थिइन्–वीरा । वीराका सेता जीवनमा कताकताबाट एउटा फौजी आयो–रङ्गीन सपना बोकेर । उसले बाँसुरी बजायो । बाँसुरीको मीठो धुनमा लहराउनु मनको स्वभाव हो । मनको स्वभावलाई कसले पो छेक्न सक्छ र ? परिणाम–वीराका हृत्तलमा फौजी पस्यो, फौजीका अन्तर्मनमा वीरा ।
त्यो सुदूर समय–पूर्व पतिकै घर नव पति भित्र्याउनु वीराको साहस थियो । साहस जीवन हो र त्रास मृत्यु । मान्छेले जानाजान मृत्यु रोज्दैन । साहसकै टेको टेकेर जीवन गतिशील बन्यो वीराको । फौजी र वीराबाट दुई सन्तान भए । तिनै दुई सन्तानमध्येको जेठो हो–मानस । अर्थात् मानस र अलखनन्दा दुबैकी साझा आमा हुन्–वीरा । ‘एक फूल दो माली’–भनौं आमा एक बाबु फरक ।
दुबै बाबुका सन्तानलाई ममताका एकै आँचलमा छोपेर हुर्काउनु वीराको वीरता थियो । यसैले वीराबाट हारेको समाजले तिनलाई उपनाम दिएको थियो–‘बघिनी बूढी’ ।
अलखनन्दा र मानस दुबैले आज एकसाथ सम्झिए–बघिनी बूढीलाई ।
भित्तामा ‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ लेखिएको स्वर्णपदक झुन्डिएको थियो भने टेबुलमा कफीको तातो ग्लास नजिकै मानस लिखित औपन्यासिक कृति–‘बघिनी बूढी’ । हो, भित्ताको स्वर्णपदक ‘बघिनी बूढी’ले सर्वोत्कृष्ट वर्ष पुस्तकको रूपमा पाएको सबैभन्दा ठूलो सम्मान थियो ।
रमला, तँ पनि !
सबैले बाँझी भने रमलालाई ।
रमलाकी साथीले रमलालाई सल्लाह दिई–“धेरैले सुझाएका र मैले पनि अपनाइसकेको एउटा उपाय छ । अपनाउँदा समस्या टर्छ भने टार्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।”
मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको–अन्तर्मुखी रमलालाई उसकी साथीले सुझाएका उपाय मनप¥यो ।
घरबाट कहिल्यै एक्लै ननिस्कने साधु बिरालो रमला आज सखारै नुवाइधुवाइ सकेर पशुपतिनाथको मन्दिर पुगी–उनैका मानसपुत्र भैरव भेट्न । मन्दिरको दक्षिणतिर भैरवको अगङ्गको एउटा न्यानो मूर्ति थियो । मूर्ति अघिल्तिर कामना बोकेर उभिएका धेरै महिलाहरू लामबद्ध थिए । ऊ पनि लाममै लामबद्ध भई । मनमा अनेकन कल्पनाहरू आए । जतिजति लाइन छोट्टिंदै गयो त्यतित्यति ऊ लज्जावती हुँदै गई । उसलाई लाइन छाडेर भागुँझैं पनि भयो तर भागेर जाने ठाउँ पनि थिएन । ऊ भैरवको मूर्ति अगाडि पुगी र पूजा गरी । भैरवका यौनाङ्गसित आफ्ना यौनाङ्गलाई कपडा बाहिरैबाट टुपुक्क टँसाएर भाग्न मात्र के आँटेकी थिई एउटा मसिनो नारी आवाज सुनी–“रमला, तँ पनि ?”
पुत्रप्राप्तिको कामना लिएर मूर्ति पूजामा पुगेकी आमा जीवनाका हातमा रातो रुमालले छोपिएको एउटा पञ्चपाला थियो ।
“खै, पानी पर्ला जस्तो छैन ठूली ।” – केदारले असार पन्ध्रको नीलो आकाशमा आँखा ओछ्याएर भन्यो ।
“रेडियो सुन्यो मल प्रशस्त भित्रिएको सम्चार भन्छ तर बजार मल दिंदैन ।” – ठूली निधारमा गाँठो पारेर बोली ।
“पोहोर साल धान प्रशस्त फल्यो तर भारतीय धान हुलेर फापरको भाउमा बेच्नुप¥यो ।” – केदारले नमीठो पोहोर सम्झियो ।
“राम्रो फले पनि दुःखै र नफल्दा पनि दुःखै” – दुःखै दुःखको पसारो देखी ठूलीले ।
कोक्राको सानी नानी च्याँहाँ च्याँहाँ गरेर रोई । कोक्राबाट नानी झिक्दै ठूलीले भनी – “सानीका बा, यसपाला राम्रो फल्यो र भाउ लागिहाल्यो भने नानीका लागि एउटा दुहुनो जोर्नुपर्छ है । दुधले घाँटी रसाइदिन पा’भे पोहोरकी नानी बाँच्ने थी । म बर्सेनी पाउन सक्दिन अब ।”